Galmudug oo ku baaqday in la joojiyo colaadda Xananbuure | Dhacdo
Home Wararka Maanta Galmudug oo ku baaqday in la joojiyo colaadda Xananbuure
Galmudug oo ku baaqday in la joojiyo colaadda Xananbuure
Wasaaradda Arrimaha Guddaha Galmudug iyo odayaasha dhaqanka oo ay wehliyaan Mas’uuliyiin kale ayaa ku baaqey joojinta xiisad colaadeed oo u dhexeeysa beelo walaalo ah oo kasoo cusboonaadey deegaanka Xananbuure ee waqooyiga gobolka Galgaduud.
Odayaasha dhaqanka ee Dhuusamareeb ku sugan ayaa dalbadey in si shuruud la’aan ah loo joojiyo colaadan oo saakay ka aloosantay dil loo geystay qof shacab ah, iyagoo si gaar ah uga dalbadey maamulka Galmudug in uu ciidamo soo celiya xasiloonida udiro Deegaankan.
Wasiir Dowlaha Caafimaadka Galmudug Axmed Faafaale iyo Wasiir ku xigeenka Shaqada iyo arrimaha Bulshada Galmudug Maxamed Nuur Diini ayaa iyana ugu baaqey siyaasiyiinta labada dhinac in ay si deg deg ah u gaaraan deegaankan oo ay isisoo hor fariisiyaan odayaasha si xal loo gaaro.
Ugu dambeyn Wasiir Dowlaha Wasaaradda Arimaha Guddaha Galmudug ahna ku simaha wasiirka mudane Axmed Xasan Cali Axmed Dheere ayaa adkeeyay muhiimada nabaddu u leedahay shacabka Xananbuure oo mudo lagu howlanaa heshiisiintooda.
Previous articleShirkii Golaha Amniga Qaranka oo dib loo dhigay
Next articleJames Swan oo Golaha Ammaanka uga waramay xaaladda dalka